डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ January 6, 2021
घटनास्थल अगाडिको सडकमा दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिंदै । तस्बीर: जगत अम्बु गुरुङ
१५ नोभेम्बरमा ८ नेपालीको ज्यान जाने गरी भएको आगलागीको घटनाले यहाँका नेपाली अनि हङकङ सरकार मात्र होइन, विश्व नै स्तब्ध हुनुपुग्यो ।
तिहारको झिलिमिलीलाई कालो रात बनाउने आगलागीको यो घटनाले सबैलाई शोकमग्न मात्र बनाएन दरिलो पाठ पनि सिकायो।
२९ नोभेम्बरमा इन्टरनेशनल फ्युनरल पार्लर, हुङहममा राज र रायन नेपाल बाबुछोरालाई अन्तिम बिदाइ गर्न पुगेकाहरूले आँखामा आँशु थाम्न सकिरहेका थिएनन् । आगलागीमा निधन भएकाहरूको एकपछि अर्को परिवारले अन्त्येष्टिको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
तिहारको लागि बालिएको मैनबत्तीबाट सल्किएको आगो धेरैको काल बनेर आयो । सो घरको तेस्रो तलामा परिवारसहित बस्दै आएका किरण लिम्बू आगलागीका प्रत्यक्षदर्शीमध्येका एक हुन् । उनका अनुसार आगो–आगो भन्दै मानिसहरू चिच्याउन थालेपछि उनी आगो निभाउन ‘फायर एक्स्टिङगेसर’ खोज्न थालेका थिए । तर, नभेटेपछि सडकतिरको झ्यालको रड तोडेर बाहिर निस्किए । उनको पछि–पछि अरु ५ जना सो झ्यालबाट बाहिर निस्किएका थिए भने अरु केही भान्छाकाेठा र शौचालयको झ्यालबाट भागेर बाँच्न सफल भएका थिए । उनी भन्छन्, “आगो निभाउने सामान नै थिएन । धुवाँले श्वास फेर्न गाह्रो भएसँगै आगो फैलिन थालेपछि ज्यान बचाउनतिर लागें ।“ (हेर्नुहोस्, लिम्बूको अनुभव: ‘हेर्दाहेर्दै आगोको मुस्लो आयो !’)
हङकङ जस्तो हरतरहले सुरक्षित र सुविधासम्पन्न ठाउँमा पनि आगलागीकै कारण एकसाथ कसरी यतिका मान्छेको मृत्यु भयो ? धेरैको दिमागमा यस्तो प्रश्न आउनु स्वाभाविक थियो ।
जिरे खुर्सानी नेपाली ‘रेष्टुरेण्ट’ भनेर चिनिने उक्त क्लबमा त्यस साँझ ३ वर्षे बालकको जन्मदिन मनाउन, तिहारको रमझम र साँझ डिनरका लागि नेपालीहरूको जमघट भएको थियो ।
ज्यान गुमाउने ८ जनामा एकै परिवारका ५ जना छन् । ‘वर्थ डे ब्वाय’ लाई भने उनकी आमा गीता कँडेलले शौचालयको झ्यालबाट बाहिर फ्याँकेर बचाउन सफल भइन् । तर, उनकी १३ वर्षीया छोरी किर्तिका र श्रीमान् युवराज भने बचेनन् । आफू पनि झ्यालबाट फाल हानेकी गीता अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत छिन् ।
आगोको लप्कोले युवराजका ज्वाईं राज नेपाल र उनका ९ वर्षीय छोरालाई पनि निल्यो । उनका ७ वर्षीय अर्का छोरा र बहिनी पूजा भने बँचे । युवराजका भाइ कृष्ण कँडेलकी छोरी १८ वर्षीया सुरेखाको भने उपचारकै क्रममा निधन भयो । कृष्ण, उनकी श्रीमती र छोरा अझै अस्पतालमा जीवनका लागि संघर्षरत छन् ।
बिनिता तामाङ र मुकेश श्रेष्ठ ।
घटनामा तीन वर्ष अघि मात्र प्रेम विवाह गरेका मुकेश श्रेष्ठ र बिनिता तामाङ जोडीका रुपमा कहिल्यै भेटिने छैनन् । रेष्टुरेण्ट सञ्चालक समेत रहेकी बिनिताको शव अस्पतालमा राखिएको छ भने मुकेश उपचाररत छन् ।
घटनामा निधन भएकीमध्ये अनिता निरौला आमा शान्ता (नार्कित) थापा र १३ वर्षीया छोरीका साथ बस्दै आएकी थिइन् । त्यस दिन सञ्चो नभएर घरै बसेकीले नातिनी जोगिएको उनी सुनाउँछिन् । घटनास्थल नजिकै रिक्लाइमेशन स्ट्रिटको ७ तले भवनको साँघुरो कोठामा छोरी गुमाएकी आमा शान्ता र आमा गुमाएकी छोरी पीडादायी अवस्था छन् । साँझपख साथीहरूसँग जमघट गर्न पुगेका शेरबहादुर गुरुङ पनि बच्न सकेनन् । उनका साथीहरू झ्यालबाट निस्किएर बँचेका थिए ।
आगलागीका कारण अस्पताल भर्ना भएका ११ जनामध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ । खानेकुरा ‘टेकअवे’ का लागि पुगेकी तिला राई पनि आगलागीको चपेटामा परिन् । अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी उनी अझै ठिक हुन सकेकी छैनन् ।
मृतकका परिवारप्रति सहानुभूति र घाइतेको स्वास्थ्यलाभका लागि करिब दुई सातासम्म घटनास्थल अघिल्तिर सडकमा सेतो फूल, धुप, पानीका बोतल चढाएर प्रार्थना गर्ने र दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेको ताँती लागेको थियो ।
नेपाली महावाणिज्यदूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सहित यहाँका ५ वटा अगुवा संस्थाहरू हङकङ नेपाली महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाली वैचारिक महासंघले सामुहिक श्रद्धाञ्जली सभा गरे । चिनियाँ समुदायले परम्परागत रुपमा मृतकहरूको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै धर्मगुरुहरू राखेर पूजापाठ समेत गरे ।
हङकङ सरकार र यहाँका बासिन्दालाई यो आगलागीको घटनाले धेरै कुरा सोच्न बाध्य बनाएको छ । आगलागी भएको घटनास्थलमा ढोका, टेबल, बेन्च, भुईंसम्म जलेको देख्न सकिन्छ ।
समयमै ‘फायर सेफ्टी’को प्राथमिक रोकथाम हुन सकेको भए यस्तो भीषण आगलागीको सामना गर्न पर्दैनथ्यो । हङकङ सरकारको श्रम विभागबाट मान्यता प्राप्त रेजिस्टर सेफ्टी अफिसर रहेका मनोज गौतम नेपाली लगायत साउथ एसियनहरूमा फायर सेफ्टीबारे कम चासो रहेको बताउँछन् । यो घटनामा ‘साउण्ड प्रूफ’का लागि कालो फमको साटो आगो नसर्ने रकउलको प्रयोग भएको भए पनि आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सम्भावना कम रहने उनी बताउँछन् । (हेर्नुहोस्, गौतमको लेख: लापरवाही नगरौं)
आगोले ध्वस्त जिरे खुर्सानी रेष्टुरेण्टको भित्री भाग । तस्वीर: जगत अम्बु गुरुङ
सन् २०११ पछि हङकङको आगलागीमा धेरैजना हताहत भएको यही घटना हो । त्यसबेला मङकङ क्षेत्रमा भएको आगलागीमा ९ को मृत्यु र ३४ जना घाइते भएका थिए ।
हङकङ २४ घण्टा जागा रहने संसारकै सबभन्दा सुरक्षित, चल्तीको व्यापारिक केन्द्र, बसोबासका लागि महंगोमध्येको एक शहर । विज्ञान–प्रविधिमा फड्को मारेको संसारकै उदाहरणीय भूगोल ।
हङकङ भन्नासाथ बाहिरी संसारले यसरी नै सम्झिने, बुझ्ने र चिन्ने शहर ।
व्यक्तिगत र कार्यस्थलको सुरक्षाका लागि अत्यन्तै संवेदनशील हङकङलाई यो घटनाले झस्काइदिएको छ । किनकि यहाँको हरेक निर्माण क्षेत्र, व्यापारिक भवन, होटल, रेष्टुरेण्टहरूमा ‘सेफ्टी फस्र्ट’ को नियम लागू हुन्छ । सेफ्टी तालिमविना यहाँ काम नै पाइदैंन । यहाँका ८० प्रतिशत नेपालीले सेफ्टी तालिम लिएर खल्तीमा ग्रीन कार्ड बोकेका छन् । यो घटनाले नेपालीलाई आफूले लिएको तालिम र काम गर्दाको अनुभव घर–समाज, व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।
त्यसो भए चुक कहाँ भयो त ? आगलागीका केही मानवीय कारण पनि छन् । काउलनको यो क्षेत्रमा ५० वर्ष पुराना धेरै भवन छन्, जसमा आकस्मिक ढोका र आगो निभाउन प्रयोग हुने ‘फायर स्प्रिङ्कल’ जडान गरिएका छैनन् । नयाँ घरहरूमा जस्तै पूर्ण ‘फायर सेफ्टी’ नहुनु पनि धेरै हताहत हुनुको एउटा कारण हो ।
व्यक्तिगत ‘सेफ्टी’प्रतिको मानवीय हेलचक्य्राइँ पनि घटनाको अर्को कारण बन्यो । ‘साउण्ड प्रूफ’का लागि प्रयोग हुने प्रज्वलनशील सामग्रीसहितको ढोका र भित्ता हुनु तथा ‘फायर एक्स्टिङगेसर’ समेत नराख्नु लापरवाहीको पराकाष्ठा नै हो । त्यसमाथि आगो लाग्नासाथ वारुणयन्त्र बोलाउनुको साटो आफैं आगो निभाउने प्रयास गर्नु अर्को कमजोरी बन्यो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, हङकङका अध्यक्ष डासुराम पराजुली यो घटनालाई पाठको रुपमा लिएर अबका दिनमा यस्तो घटना हुन नदिन सबै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो घर तथा पसल, कार्यालयमा ‘फायर एक्स्टिङगेसर’ सहितको सुरक्षा अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । क्लबमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका ‘खाजाघर’हरूलाई व्यवस्थित गर्न चेम्बरले पहिलेदेखि नै पहल गर्दै आएको पराजुली बताउँछन् । (हेर्नुहोस् अध्यक्ष पराजुलीसँगको कुराकानी)
घटनालगत्तै हङकङ सरकारका प्रमुख क्यारी लामले घटनास्थलको निरीक्षण गरी अबका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिइसकेकी छन् । पुराना घरहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले चासो दिन थालिसकेको छ ।
घटनाका पीडितलाई सरकारले राहत घोषणा गर्न बाँकी नै छ । तर, पीडितका आँखाबाट आँशु बाँकी छँदै, मृतकका परिवार, घाइते र प्रभावितहरूलाई दरिलो साथ, सान्त्वना र हौसलाको साटो उनीहरूलाई समेत जानकारी नदिई पीडितका नाममा आफूखुशी सहयोग संकलनको हानथाप चलेको थियो । यस्तो हानथाप बढेपछि नेपाली कन्सुलेट जनरलको संरक्षकत्वमा ‘याउमाते अग्नि पीडित सहयोग समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ । (याे पनि हेर्नुहोस्: कन्सुलेटको संरक्षकत्वमा अग्नि पीडितलाई सहयोग)
समुदायका लागि भनेर खुलेका कतिपय संघ–संस्था यति ठूलो घटना हुँदा एकजुट भएर, एउटै आवाज लिएर सरकार र यहाँका मिडियासँग छलफल गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय निकायले यहाँका ५० वर्ष पुराना भवनहरूमा आगलागीलगायतका जोखिम रहेको बरोबर बताइरहेको अवस्थामा कसरी आफ्नो समुदायलाई सचेत गर्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्नेमा सामाजिक संघ–संस्था एक भएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
मृत्यु र बिछोडको आभास !
जति ढिलो सुते पनि निन्द्रा
बिहानसम्म न हो
जति छिटो हिंडे पनि यात्रा
चिहानसम्म न हो । –राज
युवराज कँडेलको फेसबुक पेजमा लेखिएको यो हरफ जस्तै उनको जीवन छिटो चिहानको यात्रामा परिणत भयो । उनीसँगै उनकी १३ वर्षीया छोरी किर्तिकालाई पनि निल्ने त्यो आगलागीबाट ३ वर्षीया छोरा र श्रीमती भने बाँच्न सफल भए ।
युवराज कँडेलको परिवार ।
बाबु–आमाले सधैं आफ्नो आयु पनि आफ्ना सन्तानमा थपियोस्, आफूलाई जति दुःखकष्ठ भए पनि छोरा–छोरीलाई कुनै ठेस नलागोस् भन्ने कामना गर्छन् । त्यस्तै; युवराज र उनकी श्रीमतीले छोरा–छोरीलाई त्यो विपत्बाट बचाउन ज्यानको बाजी लगाए । ‘वर्थ डे ब्वाय’ लाई उनकी आमाले शौचालयको झ्यालबाट बाहिर उद्धारकर्ता भएतिर फ्याँकेर बचाइन् तर आफू फाल हान्दा गम्भीर घाइते भइन् । उद्धारको क्रममा छुटेको ३ वर्षे बालकको जुत्ता अझै घटनास्थलसँगैको घरको कौसीमा देख्न सकिन्छ ।
घटनास्थलभन्दा पछाडिपट्टिको भाग । उद्धारका क्रममा छुटेको ‘वर्थ डे ब्वाय’को जुत्ता सँगैको घरको कौसीमा (रातो घेराभित्र) । तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
१५ नोभेम्बर बिहान युवराजले आफ्नो फेसबुकमा छोरा र परिवारका तस्वीरहरू पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, “जन्मदिनको सुनौलो शुभकामना । सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना, भगवान सधैं तिम्रो साथ रहुन्, असल र ज्ञानी बन्नु, ठूलालाई आदार र सानालाई माया गर्नु, यही छ मेरो भगवानसँग प्रार्थना । सधैंभरि शिर उच्च होस् । हरेक खुड्किला यसरी नै पार गर्दै जानू । सधैंभरि हँसिलो मुहार होस् । यही मेरो तिमीलाई आशीर्वाद ।” यसरी छोरालाई दीर्घायुको कामना गरेको १२ घण्टा नबित्दै छोरालाई बचाएर उनी अनन्त यात्रामा गए ।
यो आगलागीले कँडेल परिवारसँगै हङकङेली नेपाली समुदायलाई कहिल्यै निको नहुने घाउ दिएर गयो । युवराजका बहिनी ज्वाईं राज, भान्जा र भाइ कृष्ण कँडेलको परिवारमा १८ वर्षीया छोरीको निधन भयो भने परिवारका अन्य ४ जना सख्त घाइते भए ।
बिछोडको संकेत !
कहाँ गयो जुरेली किन गीत गाउँदैन ?
तिम्रो जति मया त लालुमाई किन होला कसैको लाग्दैन…
घटनाको एक साता अघि ८ नोभेम्बर साँझ जोर्डनकै कंगन रेष्टुरेण्टमा यही गीतमा पूजा नेपाल (तुलसी), श्रीमान् राज नेपालसँग नाँचिरहेकी थिइन् ।
यो खुशी उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत लाइभसमेत गरेकी थिइन् । त्यस दिन पूजाको जन्मदिन थियो । भोलिपल्ट पूजाले आफ्नो जन्मदिनको पारिवारिक तस्वीर फेसबुकको प्रोफाइलमा राख्दै लेखेकी थिइन्, “जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ नियम हुँदैन । जहाँ नियम हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन । … मेरो सानो सुखी परिवार ।”
आफ्नो जन्मदिन मनाएको एक सातापछि १५ नोभेम्बरमा पूजा सपरिवार भदै (दाजु युवराज कँडेलको ३ वर्षीय छोरा)को जन्मदिन मनाउन पुगेकी थिइन् । तर, यो दिन पूजाको लागि बज्रपात बनेर आयो । श्रीमान् राज र ९ वर्षीय जेठा छोरा अब उनीसँग रहेनन् ।
अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा राखिएको शोक पुस्तिकामा स्वर्गीय बाबु–छोरा ।
“तिमीविनाको जिन्दगी, जिन्दगी नै भन्दिनँ म, जिन्दगी नै भन्दिनँ ।” दुई साता अघि पूजाले श्रीमान् राजसँगको तस्वीर राख्दै फेसबुकमा यस्तो लेखेकी थिइन् ।
पूजा नेपालले फेसबुकमा श्रीमान् सहितको फोटो राखेर लेखेको स्ट्याटस ।
घटनाको तीन दिन अघि १३ नोभेम्बरमा उनले एउटा टिकटक पोष्ट गरेकी थिइन्, जसले कतै अनिष्टको आभास पहिल्यै त थिएन भन्ने पनि लाग्छ । टिकटकमा उनले गाएकी थिइन्ः
बादल फाट्यो उराठै दिन आयो
खुशीका दिन गयो कि झैं भयो…
अझ ४ नोभेम्बरमा यी दम्पतीले बनाएका २ वटा टिकटक हेर्दा दुवैलाई एक–अर्काको साथ छुट्ने डर र बिछोडको संकेत भएझैं लाग्छ । टिकटकमा राजले गाएका छन्ः
तिमी टाढा भए जिन्दगीमा
मनभित्र मेरो तस्वीर
सँगसँगै बिताएको त्यो साथ नभुल्नु है
आफैं सम्झी गरेका ती बात नभुल्नु है
तिमीलाई माया गरिरहन्छु…